China eyi na mmetụta na-eguzogide ọgwụ 92 alumina seramiiki linin cone tube / taper tube maka Ngwuputa ebu pipeline ụlọ ọrụ na suppliers | YUNFENG
Mmadụ Bịa ka ZIBO YUNFENG INDUSTRIAL CERAMICS CO., LTD
Email Nkwado zbyunfeng@yunfeng.cn
Kpọọ Nkwado +86 0533 5556936
Akwụkwọ centrifugal Cleaner
Low agbanwe agbanwe
Mid njupụta Cleaner
High njupụta Cleaner
Alumina seramiiki efere-Mozis-brik-tile
Mmiri akpịrị ịkpọ nkụ - igbe nnabata
Alumina seramiiki anwụrụ-mgbanaka-tube-ekwe-n'ikpere aka
Eyi eguzogide ọgwụ alumina Efere agbakọta
Alumina seramiiki maka nhazi
Alumina seramiiki cone -nozulu
606 / 400L-naịlọn ihe ala anọgidesi Cleaner na p ...
Hydrocyclone cone, obere nkwado dị ọcha seramiiki cone
elu-anọgidesi abụọ-mmetụta pulp Cleaner nke wast ...
350 Pulp Cleaner maka Akwụkwọ mkpofu Akwụkwọ
92% Alumina Efere Lining Steel ricgha Site Fac ...
95% Alumina Efere Lining & Steel Pipeline Dire ...
Eyi eguzogide alumina seramiiki azụ agbata ikiaka shan ...
seramiiki dehydrating mmiri, akpụ efere, igirigi ...
Eyi na mmetụta na-eguzogide ọgwụ 92 alumina seramiiki linin cone tube / taper tube maka Ngwuputa ebu pipeline
Nkọwapụta Ngwaahịa Abrasion Resistant Material Handling System Ceramic Lined Elbow Ihe kachasị ọnụ ahịa na-eguzogide ọgwụ maka ikpere na tee Sinho jiri mado, ịgbado ọkụ ma ọ bụ dovetail iji dozie seramiiki na-eguzogide ọgwụ na mgbidi nke ọkpọkọ ahụ, na-eme akwa mgbochi abrasion siri ike. Na elu eyi eguzogide ya e ọtụtụ-eji na ulo oru ụlọ ọrụ pneumatic erute, haịdrọlik nnyefe usoro, karịsịa mbuze saịtị nke ikiaka, ịkụ gọlfụ, na nkesa. Ọ bụ otu n'ime ihe kacha mma ...
seramiiki: 92% / 95% 97% 99% alumina & ZTA
Abrasion eguzogide ọgwụ Ihe njikwa System Efere Lines n'ikpere aka
Ihe kachasị dị ọnụ ala na-eguzogide ọgwụ maka ikpere na ịkụ
Sinho jiri pasta, ịgbado ọkụ ma ọ bụ nduru iji dozie seramiiki na-eguzogide ọgwụ na mgbidi nke ọkpọkọ ahụ, na-akpụ akwa mgbochi abrasion siri ike. Na elu eyi eguzogide ya e ọtụtụ-eji na ulo oru ụlọ ọrụ pneumatic erute, haịdrọlik nnyefe usoro, karịsịa mbuze saịtị nke ikiaka, ịkụ gọlfụ, na nkesa. Ọ bụ otu n'ime ọwa kachasị mma na ọnụ ahịa ya bara uru.
Tapawa: n'okpuru 300 ℃
Eldgbado ọkụ: n'okpuru 600 ℃
Ntughari: n'okpuru 800 ℃
Ihe siri ike dị ka ntụ ntụ, ntụ, slag na slurry, dị ka kol slurry, slag, na aluminom mmiri mmiri.
A na-ejikarị ya na nkà mmụta banyere ígwè, nsị, ọkụ eletrik, coal, petrochemical na ụlọ ọrụ ndị ọzọ, gas siri ike, usoro ihe eji ebu mmiri mmiri, karịsịa maka nnukwu mmebi na-eme n'ikpere aka, njikọ atọ.
Ezigbo nguzogide akwa
N'ịnabata alumina ceramik dị ka eriri, ndụ nke ọkpọkọ ahụ karịrị ugboro 10 karịa nchara siri ike nkịtị.
Alumina seramiiki nwere uru nke oke mmiri mmiri mbuze, acid na alkali na-eguzogide, na-egbuke egbuke nchedo.
Ime dị larịị na enweghị mbuze, ire ụtọ nke ọkpọkọ dị elu karịa ọkpọkọ ọla ọ bụla ọzọ.
Ngwakọta ngwongwo nwere ike ịdị ogologo oge na-agba ọsọ n'okpuru ọnọdụ okpomọkụ -50-800 ℃.
The arọ nke onyinye anwụrụ na-nnọọ na-abịarute na ọkara nke nkedo nkume anwụrụ na mkpokọta 50% nke alloy anwụrụ. Na uru nke na-eyi na corrosion-eguzogide, na ndụ nke anwụrụ bụ n'ụzọ pụtara ìhè ogologo karịa ndị ọzọ na-eyi na-eguzogide ọgwụ ọkpọkọ ugbu a na-eri nke nzukọ na-agba ọsọ na-n'ụzọ dị ukwuu belata.
Nzukọ dị mfe
Ruru ka ya arọ arọ na ezi weld ike, ọ nwere ike kpọkọtara mfe na ịgbado ọkụ ma ọ bụ Flange njikọ na n'ụzọ dị ịrịba ama belata ihe idozi na-eri.
Dabere na nchara ọkpọ ahụ na ihe na-ebugharị, ụdị pipeline a nwere ike ịhọrọ iji ụdị ihe seramiiki abụọ, mkpokọta seramiiki ma ọ bụ taịliki seramiiki nke achara. SINHO nwere ike ịnye pipelines dịka ihe ndị ahịa chọrọ si dị.Ọ dị oke mma iji nye eserese akụrụngwa gị yana njirimara ọnọdụ saịtị, yabụ anyị ga-enye gị kacha mma mgbochi abrasion na iyi mmemme maka gị.
Nke gara aga: eyi na-eguzogide ọgwụ seramiiki lining ígwè tube
Osote: 92 alumina seramiiki na-ekpuchi eriri maka abrasion na corrosion na-eguzogide ọgwụ ngwọta
92% 95% eyi eyi eguzogide alumina seramiiki tube Pipe ikiaka N'ihi Steel agbakọta Manufacturer
Alumina Efere agbakọta Achara Pipe Maka Iguzogide Wear
Manuacturer Ceramic Lines Elbow Pipe Na Nnukwu Nguzogide Wear
Yiri Abrasion Na-eguzogide Alumina Efere Ejiri Ejiri Ejiri Ala
Obodo Zichuan nke ọdịda anyanwụ Liu watts Industrial Park, Nke 1. Zibo, Shandong, China
Akwụkwọ pulp ọcha ngwá desande ...
2019 na Cairo, Egypt (igwe na-eme akwụkwọ)